သစ်ပင်စိုက်နေတဲ့ The Lady & Future King (သတင်း ဓာတ်ပုံ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » သစ်ပင်စိုက်နေတဲ့ The Lady & Future King (သတင်း ဓာတ်ပုံ)
Posted by မြစပဲရိုး on Jun 21, 2012 in News | 29 comments
Charles and Camilla Daw Aung San Suu Kyi
အရီးလတ်ရေ ၊ ဘာအပင်အမျိုးအစား စိုက်တာလဲဗျ…
ပုရ်ှဂလေး အားငယ်နေရင် ဦးကြောင်ရင်ခွင်ထဲ ခိုဝင်လှဲ့… အပြတ်အားပေးမယ် :cool:
တောက် ကကြောင်ကြီး မူးများနေလားမသိ
သြော် တဏှာ တဏှာ ဘာမှမမြင်တော့ပါလား…..
ပို့စ်ဖတ်ပီး အောက်ကကွန်းမင့်ကြည့်ပီး လမ်းကြောင်းနဲနဲလွဲသွားတယ် ….
ဒါနဲ့ ဘာပင်စိုက်တာတုန်းဗျ ကျွန်းပင်လား ညောင်ပင်လား ဟိုဂမ္ဘီရအစီအရင်တွေရော ပါသေးလားဗျ…
Westminster Hall မှာမိန့်ခွန်းပြောခွင့်ရလောက်အောင်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာ ဘယ်သူ့ကို ဘယ်လိုလိုက်ကြွားရမှန်းတောင်မသိတော့ပါဘူးအရီးရယ်။ အိမ်ပြင်ထွက်ပြီးအော်လိုက်ချင်တယ်။ Future King ကတောင် လက်ခံတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်က ဘယ်လိုပြောရမှန်းတောင်မသိပါဘူး။ စိုးရိမ်မိတယ် အရီးရယ်။ မနာလိုသူတွေပေါလာမှာကို။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ ဂုဏ်အကြီးကြီးယူပါတယ်။ မြန်မာကွလို့ အကျယ်ကြီးအော်လိုက်ချင်တယ်။ [:-bd]
၀မ်းသာဂုဏ်ယူ စွာ ကြည့်ရှု့ မှတ်သားလိုက်ပါတယ်။
မှန်လိုက်လေဗျာ…တကယ်ကိုဂုဏ်ယူစရာပါ…ဒီလို လူမျိုးကျုပ်တို့နှိင်ငံမှာ နောက်တစ်ယောက်ဆိုတာ တော်တော်နဲ့တော့ မလွယ်ဘူးထင်တယ်…
ဘာ အပင် စိုက်တာလဲတော့ မသိဘူး..
ကြည့်ရသလောက်တော့ သစ်မွှေးမဟုတ်ပါဘူး မဆူးရေ
လေဒီရှူးခေါ်မလားဘဲ အဲသည်ဒေါက်ဖိနပ်တော့ မကြိုက်ဘူးရယ် ပုံတော်ဖိနပ် မထူမပါးလေးတွေဆို သိပ်လှမှာ ကျုပ်အမြင်ပေါ့…..
အရမ်းကို ဂုဏ်ယူစရာကောင်းလိုက်တာ ။
ဒါပီးရင် ပြင်သစ်သွားမှာတဲ့ ….
အမေစုက ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် ကျက်သရေရှိလိုက်တာနော်…………….. မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ဆိုတော့ ပိုပြီးဂုဏ်ယူမိတယ်။ အမေစုကိုကြည့်နေတာ ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာဝတ်စုံကိုပဲ အမြဲဝတ်တာတွေ့ရတယ်။ အရမ်းကို ဂုဏ်ယူပါတယ် အမေရယ်။ အခုခေတ် မြန်မာဝတ်စုံကိုတန်ဖိုးမထားသော မိန်းကလေးများ အတုယူသင့်ပေသည်…………….
အရီးရေ..အခုတလော အမေစု သတင်းတွေ..ဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်မိရင် ကျွန်တော် တွေးမိတာ တစ်ခုရှိတယ်…အမေစု ရဲ့မြန်မာဝတ်စုံတွေက အရမ်းလှပီးကျက်သရေ ရှိလွန်းလို့ ….အမေစု ရဲ့
ဒေါ်စု က သည်အပင်ကလေးတင်မက၊တိုင်းပြည်အတွက်အသီးအပွင့်တွေပါမှန်မှန်ကန်ကန်သီးလာနိုင်ဘို့ —
ဓါတ်ပုံကြည့်ပြီး သံဝေဂရလိုက်တာ ….
သုံးဆယ့် ရှစ်ဖြာ မင်္ဂလာ တရားတော်တွေထဲက ကလေးတွေ ဆိုတာလေ … ကိုယ့်ကို နှိမ့်ချအမြဲနေ ဆိုတာလေ … ။ ဒီပုံထဲမှာ ကြည့်ပါဦး … အမေစုသစ်ပင်စိုက်တာ .. ပေါက်တူးကိုလည်း ရွေစက္ကူ ၊ ငွေစက္ကူတွေ ကပ်မထားသလို ၊ ဘေးကနေပေါက်တူးကိုင်ပေးမယ့်လူ ၊ မြေသြစာထုတ်ကိုင် စောင့်မယ်လူ ၊ ရေပုံးကိုင်စောင့်နေမယ့်လူလည်း မရှိဘူး …. ။ ကော်ဇောနီတွေတောင် မြက်ခင်းပေါ်မှာမရှိဘူး ။
နိုဘယ်ဆုရှင်တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ရော ကမ္ဘာက အသိမှတ်ပြုတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်တစ်ယောက် … ဟိတ်ဟန်မပါတဲ့ သွင်ပြင် ….. ဘယ်လောက် မြင်ရတာကျေနပ်စရာကောင်းသလဲနော် …. ကျေးဇူးပါ အရီးလတ်ရေ
အဲဒါ ဘယ်နေရာမှာလဲဟင် …..
Clarence House မှာပါဆိုနေ။ စာလည်းသေချာဖတ်ဘူး။ ဟိဟိ တစ်ဆယ်ယူပြီးလစ်ပြီ။
အမေစုအတွက် ဂုဏ်ယူပြီး မြန်မာဟေ့လို့ အခုမှပဲ မျက်နှာပန်းပွင့်လာတော့တယ်။ မြန်မာသတင်းစာမှာ မဖော်ပြတာက “ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသွားတဲ့ခရီးဖြစ်နေလို့ လွှတ်တော်နဲ့သက်ဆိုင်ပြီးသွားရတဲ့ခရီးမဟုတ်လို့ သတင်းစာမှာဖော်ပြခွင့်မရှိပါဘူးတဲ့” ။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် မဖော်ပြချင်တာက မဖော်ပြချင်တာပါပဲ။
အမှန်ဘဲဗျ လွှတ်တော်လို နေရာမှာ အမေစုလို လူတစ်ယောက်က စစ်သားတွေ၊မျက်ကန်းမျိုးချစ်